के हो मोनोरेल ? काठमाडौंमा गुड्ला त ?
Mon, Jul 16, 2018 | 03:04:11 NST
06:22 AM ( 12 months ago )
Total Views: 16.7 K
काठमाडौं, साउन २ – काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आठौं बुदाँमा सहज, सुलभ, सुरक्षित र व्यवस्थित शहरी यातायात उल्लेख छ । आठौं बुदाँको पहिलो नम्बरमै मोनोरेल, मेट्रो रेलका योजना छन् ।
त्यस्तै ललितपुर महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुदाँमा काठमाडौं महानगर र अन्य स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मोनोरेल संचालन गर्ने भनिएको छ । ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै काम नै सुरु भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
दुई महानगरको साझा योजना
छिमेकी देश भारत सहित अरु देशमा मोनोरेल नौलो होइन । नेपालमा मोनो र मेट्रो रेल अहिले पनि चर्चाको विषय हो । स्थानीय तहको चुनावमा विभिन्न दल र उम्मेदवारले समेत मोनो र मेट्रो रेल कुदाउने घोषणा पत्रमै लेखे । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको नीति तथा कार्यक्रममै मोनो र मेट्रो रेलको योजना राख्नुभएको छ ।
यसअघि काठमाडौंमा मात्र चलाउने भनिएको मोनोरेल बुढानिलकण्ठदेखि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकासम्म सञ्चालन गर्ने योजना बनिसकेको छ । देशको राजधानी रहेको काठमाडौं र ललितपुर महानगरका समस्या मिल्दाजुल्दा छन् । सडकदेखि खानेपानी, ढलदेखि धुँवा धुलोसम्म पुरानै समस्या हुन् । साना तिना समस्या पनि अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । तर दुवै महानगरका मेयरले मेट्रो र मोनो रेलका सपना देखाएका छन् । त्यसमा पनि मोनो रेल दुवै महानगरले अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमै उल्लेख छ ।
के हो मेनो रेल ?
मोनोरेल बिजुलीबाट चल्छ । यो बस भन्दा केही ठूलो र डिब्वा जोडिएको हुन्छ । जमिनबाट उठाइएको बिमको सहारामा एउटै ट्रयाकमा यो रेल गुड्छ । एउटै ट्रयाकमा गुड्ने भएकाले मोनो भनिएको हो । मोनो रेल कुदाउन ठाउँठाउँमा पिलर गाडेर ट्रयाकलाई जोडिन्छ । मोनो रेलको पांग्राले ट्रयाकलाई दुवैतिरबाट समाउँछ । मोनोरेलको लागत प्रतिकिलोमिटर २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ पर्छ ।
मोनो र मेट्रो रेल फरक हुन्
दुई ट्रयाक चाहिने, धेरै ठाउँ ओगट्ने, जमिनमुनि सुरुङ खनेर कुदाउने र अर्बौं लगानी लाग्ने मेट्रो रेल भन्दा मोनोरेल तुलनात्मक रुपमा सस्तो र सजिलो छ । मेट्रो रेल साँघुरा बस्तीमा बनाउन सकिँदैन । मोनोको तुलनामा मेट्रो रेल गुडाउनको लागि समय धेरै लाग्छ । यसले मेट्रो रेलले भन्दा कम ध्वनि निकाल्छ । तर काठमाडौं जस्तो भूबनोट, पिल्लर ट्रयाक बनाउँदा पर्ने मोड अनि भूकम्प जस्ता जोखिम मोनोरेलका लागि चुनौती हुन् भन्नुहुन्छ भौतिक पुर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य ।
मोनोरेलका राम्रा पक्ष
मोनोरेल बिजुलीबाट चल्छ । निर्माणमा सस्तो भएकाले मोनो रेलको गति तथा क्षमता मेट्रो रेलको भन्दा कम हुन्छ । मोनो रेल वातावरणमैत्री मानिन्छ । वायु र ध्वनी प्रदुषण कम हुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमै सुधार आउँछ । डिब्वाको संख्या अनुसार ५० देखि ४ सयजना सम्म एकैपटक यात्रा गर्न सक्छन् ।
तत्कालका लागि यो सपना नै हो
रेलको सपना देखाउने दुवै महानगरका मेयरले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बनाउन लाग्ने समयसम्म ख्याल गरेका छैनन् । सहज अवस्थामा पनि ६ महिना कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्न र डेढ वर्ष डिपिआर गर्न समय लाग्छ । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य भन्नुहुन्छ ‘नेपालमा तीन बर्षमा मोनोरेल कुदाउने भन्दा कसरी पत्याउनु यो सपना भन्दा पनि भ्रम हो ।’
आवश्यक नीति नियम, प्राविधिक जनशक्ति, लागत र डिपिआर अध्ययनमा नै समय लाग्ने भएकाले पनि तीन बर्षमा मोनोरेल गुड्न सक्दैन । तर मोनो होस् या मेट्रो रेल कुदाउनै सकिंदैन भन्ने होइन । यसका लागि समय लाग्छ । व्यवस्थित नीति, प्राविधिक क्षमता र लागत र अरु अध्ययनपछि काम अगाडि बढाउने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा मोनो/मेट्रो रेल कुदाउन सकिन्छ । तर अहिले नै मोनोरेल बनाउनका लागि महानगरको पुरै बार्षिक बजेटले सम्म पुग्दैन । त्यसैले काठमाडौं र ललितपुरका मेयरले देखाएका मोनोरेलको सपना तत्कालका लागि कागजमै सीमित हुने देखिन्छ।